Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Yintoni ekufuneka uyazi malunga nokufudukela eDubai
Ukutshintsha indawo yakho yokuhlala kuhlala kuyinkqubo enzima kwaye ithatha ixesha, ngakumbi xa kuziwa ekufudukeleni kwelinye ilizwe. I-United Arab Emirates lilizwe eliphuhliswe ngokwezoqoqosho nakwezobuchwepheshe. Ivulelekile kubemi abaqhelekileyo kunye noosomashishini, kodwa ayizizo zonke izinto ezilula apha. Umthombo- https://emirates.estate -Iza kukuxelela malunga neenkcukacha zokufudukela kwi-UAE.
Iimpawu zenkcubeko ze-Emirates
Ubume obuphezulu bamazwe aphesheya, uqoqosho olomeleleyo kunye neemeko zoshishino ezikhululekileyo aziyichasi into yokuba i-UAE lilizwe lamaSilamsi elinezithethe zalo.
Imithetho e-Emirates ingqongqo kuye wonke umntu: abahlali kunye nabangaphandle. Nangona into yokuba ngokumalunga neendwendwe, ngokwenene ijika iliso kwizinto ezininzi. Oku akuthethi ukuba ulwaphulo olungqongqo luya kuhlala lungohlwaywa. Abemi baseDubai banyanisekile kwiindwendwe kwaye ngokutshintshiselana koku ngokufanelekileyo balindele ukuhlonelwa kwamaxabiso asekhaya.
Ngawaphi amathemba alindele abantu basemzini
Uninzi lwabantu basemzini abafudukele e-UAE ukuze bafumane indawo yokuhlala ngokusisigxina babiza inani lezizathu ezithile. Sicebisa ukuba uyazi ngcono.
Uqoqosho oluzinzileyo kunye nemeko yemali efanelekileyo. Umba wokuphila kakuhle kwezemali utsala inxalenye enkulu yabantu abafudukayo. Izinga eliphezulu lemivuzo, akukho rhafu yengeniso, kunye nemali ezinzileyo, yenza iimeko ofuna ukuzilwela;
Utyalo-mali olunenzuzo kwi-real estate. Icandelo lezindlu nezindlu eDubai liphuhliswe kakuhle kakhulu. Oku kungqinwa yimfuno ephezulu, umsebenzi wotyalo-mali kunye nokunyuka okuthe chu kumaxabiso. Ngenxa yoko, abathengi bee-real estate zendawo abafumani nje ipropathi egqwesileyo yokuhlala, kodwa kunye ne-asethi yexabiso;
Imivuzo ephezulu. Iingcali ezifanelekileyo e-Dubai, njengakwezinye iindawo, zixabiswa, ngoko ke iinkampani zendawo zilungele ukuhlawula kakuhle;
Ukufuduka. Kukho iinketho ezininzi apho umntu wasemzini unokuba ngummi we-Emirates: umtshato, ukufunda kweli lizwe, umsebenzi, igalelo elibalulekileyo kuphuhliso lwelizwe kunye notyalo-mali kwi-real estate;
Ukhuseleko oluphezulu. I-Emirates ithatha indawo yesi-3rd indawo yokhuseleko, ngelixa iDubai ikwindawo ye-8 yezona zixeko zikhuselekileyo emhlabeni.
Ngubani oza kuvunyelwa ukuba ahambe
Iya kuvunywa kuye nawuphi na umntu osisityebi ngokwasezimalini, akukho rekhodi lolwaphulo-mthetho kunye nembali entle yetyala.
Uthini umgangatho wokuphila eDubai
IDubai sesona sixeko siphambili emhlabeni ngokwemivuzo, kunye nesona sityebi se-Emirates. Ixabiso lezindlu nezindlu eDubai liqala ukusuka kwi-USD 3,000 ukuya kwi-USD 8,100.
Ukuthenga izindlu nomhlaba kwi-UAENgaba unomdla kuyo Ipropathi ethengiswayo kwi-UAE? Jonga indawo yokuhlala yephupha kumakhulu eenketho kwiwebhusayithi ye-Emirates.Estate. Apha uya kufumana kuphela izindululo ezilungileyo ezivela kubanini abaqinisekisiweyo kunye nabaphuhlisi abakhulu be-UAE. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuhamba kunye nokuthenga izindlu nezindlu eDubai, nceda uqhagamshelane nomphathi wenkampani.